Tarsan & Farmaajo oo ka tacsiyeeyay dilka C/kaafi Hilowle. – idalenews.com
Tarsan & Farmaajo oo ka tacsiyeeyay dilka C/kaafi Hilowle.
Gudoomiyihii hore ee Maamulka Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo wareysi siiyey idaacada Kulmiye isagoo kusugan Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay weerar shalay ka dhacay meel ku dhaw KM4 oo lagu dilay Xoghayihii hore ee gobolka Banaadir Marxuum C/kaafi Hilowle Cusmaan.
Waxa uu Tarsan marka hore ka tacsiyadeeyey geerida Marxuumkaasi isagoo sheegay in markii uu maqlay geerida C/Kaafi Hilowle uu aad uga naxay saacado ka horna ay meel wada joogeen.
C/Kaafi iyo Tarsan ayaa sanado soo wada shaqeeyey waxaana uu Duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur uu ka codsaday hay’adaha Amaanka gaar ahaan Taliska Booliska inay faah faahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu dilay C/kaafi Hilowle.
Dhanka kale Ra’iisalwasaarihii hore ee dalka Somaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay Idaacada Kulmiye isagoo kusugan dalka Mareykanka ayuu si cod dheer ah ku cambaareeyey weerarkii lagu dilay Xoghayihii hore ee maamulka gobolka Banaadir C/kaafi Hilowle Cusmaan.
Waxa uu Mudane Farmaajo sidoo kale tacsi udiray dadkii kale ee ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay agagaarka KM4 ee magaalada Muqdisho islamarkaana alle uga baryey kuwii dhintay in janada ka waraabiyo kuwii dhaawacmana caafimaad alle uga baryey inuu siiyo.
Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inay wada soo mareen goob waxbarasho marxuum C/kaafi kana tacsiyadeeyey geeridiisa isagoo ku amaanay inuu ahaa nin aad uwanaagsanaa nin shaqana ahaa.
Daawo Sawirada Gabar si Dirqi ah uga bad baaday Halis Nolosheeda soo wajahday.